Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly JEREO: Ny horonantsary 'Fear Street Trilogy' an'i Netflix dia mametraka horohoro eo alohany sy eo afovoany
Vaovao Mahafaly Fialam-bolySarimihetsika mahatsiravinaNetflix (sarimihetsika)Streaming MovieTranofiara (sarimihetsika)
Iray volana latsaka isika mandra-pahatongan'izany Netflix ny Fear Street Trilogy debuts, ary ny sehatra streaming dia nametraka tranofiara vaovao androany hanome antsika topy maso lalina kokoa momba izay fampitahorana vaovao ananany!
Ny trilogy an'ny sarimihetsika dia hamoaka iray isan-kerinandro manomboka amin'ny 2 Jolay 2021 ary hatao ao 1994, 1978, ary 1666. Ny synopsis ho an'ireo horonantsary dia mivaky toy izao:
Tamin'ny taona 1994, hitan'ny vondrona tanora iray fa ny fisehoan-javatra mampatahotra izay manenjika ny tanànany mandritra ny taranaka maro dia mety hifandray avokoa - ary izy ireo no mety ho lasibatra manaraka. Miorina amin'ny andian-tantara mahatsiravina fivarotana tsara indrindra an'ny RL Stine, ny Fear Street dia manaraka ny nofy ratsy amin'ny alàlan'ny tantaram-pitiavan'i Shadyside.
The Fear Street nanomboka namoaka ny boky tamin'ny 1989. Fihetsiketsehana somary marani-tsaina teo amin'i RL Stine izany, niandrandra fa nihalehibe ny mpihaino azy ary maniry boky maniry hiaraka amin'izy ireo izy ireo. Avo kokoa ny tsatoka ao amin'ireo boky ireo, ary na dia vitsy aza ny maty ao amin'ny Goosebumps boky, izay natolony tao Fear Street dia nahery vaika kokoa.
Ny andian-dahatsoratra dia namidy maherin'ny 80 tapitrisa kopia manerantany ary mbola mijanona, ho an'ireo mpankafy mampihorohoro, ny vavahady fidiran'izy ireo amin'ny karazana.
Mahery vaika ny tranofiara vaovao, manolotra tantara izay mitsambikina mandritra ny fotoana miaraka amin'ny valiny mampivarahontsana. Topazo maso eto ambany, ary ampahafantaro anay raha mijery ianao Fear Street rehefa manomboka amin'ny Netflix amin'ny 9 Jolay 2021!
Browse Cateories Select Category Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (9) AppleTV + (4) Blu Rays (5) Horohoro amin'ny hatsikana (46) Tantara an-tsary (13) Facebook (andiany) (1) Angano (39) Rakitra hita (28) Gore (24) HBO (sarimihetsika) (5) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (54) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,655) Sarimihetsika mahatsiravina (241) Horror Series (62) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (4) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (35) Resadresaka nifanaovana (andiany) (2) Horohoro LGBTQ (38) Lisitry (sarimihetsika) (38) Lisitry (andiany) (2) Tsena (19) Monster Horror (9) Hevitra momba ny sarimihetsika (48) Sarimihetsika (14) Mozika (35) Netflix (sarimihetsika) (21) Netflix (andiany) (25) Tsy angano (4) Paranormal (75) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (52) Famerenana andian-dahatsoratra (8) Shudder (sarimihetsika) (45) Shudder (andiany) (15) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (35) Sarimihetsika mivantana (66) Streaming Series (25) Kilalao (2) Tranofiara (sarimihetsika) (199) Tranofiara (andiany) (37) Heloka tena izy (43) Lalao video (178) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (11)